FBI-da Mareykanka oo ayiday hadalkii kasoo baxay Sirdoonka CIA-da – The Voice of Northeastern Kenya
FBI-da Mareykanka oo ayiday hadalkii kasoo baxay Sirdoonka CIA-da
Star FM December 17, 2016
Waaxda dambi baarista dalka Mareykanka ee magacooda loo soo gaabiyo FBI-da ayaa ayiday hadalkii goor sii horeysay kasoo baxay ha’ayahada sirdoonka mareykanka oo ahaa in Rushka ay si qarsoodi ah u waday dadaal ay kudooneysay in Donald Trump uu ku guulesto doorashada dalkaasi ka dhacday.
Agaasimayaasha FBI-da iyo hayda kale oo sirdoon ah ayaa sheegay in kalsooni buxda ay ku qabaan in ruushka uu kulug lee yahay weeraro dhanka internetka ah oo lagu taageerayay Madaxweynaha Mareykanka loo dortay.
Tani ayaa imaaneysaa xili isbuuci hore ay aheyd markii mid kamid ah wargeysada waaweyn ee dalka Mareykanka uu soo qoray in sirdoonka CIA-da ay ogaaden in xukuumadda Rushka ay jabsatay Emailada haweneeydii la tartameysay madaxweynaha hadda xilka loo dortay.
Balse Donald Trump iyo dowlada Rushka ayaa dhamaantood iska fogeeyay eedeymaha looo jeediyay iyagoo sheegay in hadaladaasi ay yihiin kuwa aan sal iyo raadba toona laheyn.
← Taliyaha Ciidamada Militiriga dalka Gaambia oo loo diiday in uu boqdo gobolka Dahfur ee dalka Sudan
Turxaan bixinta sarakisha soo codsaday xilka guddomiyaha IEBC oo berito la billabayo →